Umasipala uzibophezele ekuhlanzeni idolobha | News24
Umasipala uzibophezele ekuhlanzeni idolobha
isithombe: lethiwe makhanyaKungesikhathi imeya yomasipala uMsunduzi yethula ngokusemthethweni ingqalasizinda entsha yokuhlanza idolobha ngoLwesine olwedlule.
IMEYA yomasipala uMsunduzi uMnu Themba Njilo uthi bengumasipala bazimisele ukugcina idolobha laseMgungundlovu kanye nezindawo zalo kuhlanzekile futhi kuphephile.
UMnu Njilo ukusho lokhu ngoLwesine olwedlule mhla zili-31 kuNhlaba (May) ngesikhathi lomasipala wethula ngokusemthethweni amaloli okuthutha udoti kanye nabogeleja emnyangweni wezemfucuza kulo masipala.
Lo masipala unikezele ngama ton- trucks amane, pay loader, geleja, RO-RO trucks kanye namaloli okuthutha udoti.
UNjilo uthe lena ngenye yezindlela yokuzama ukugcina idolobha lihlanzekile baphinde bakwazi nokuthi balethe izidingo kubantu.
“Siyajabula kakhulu ukuthi sigcine sikwazile ukuthi sizokwethula ngokusemthethweni lezi zingqalasizinda ezizosilekelela ekutheni silethe izidingo zomphakathi ngendlela efanele neseqophelweni eliphezulu. Nakulezi zindawo obekwenzeka khona ukuthi amaloli alanda udoti afike sekwedlule isikhathi loko ngeke kusenzeka ngoba manje sesinengqalasizinda eseqophelweni eliphezulu.
Lezinsiza kusebenza zisosilekelela ekutheni sifeze izifiso ngqangi zethu,” kubeka yena.
Uphinde waveza nokuthi ukuba khona kwalengqalasizinda entsha akuzugcina nje kuphela ngokulekelela ukugcina idolobha lihlanzekile kodwa futhi lizosiza umasipala uMsunduzi ukuthi ukwazi ukonga izimali eziningi.
“Umasipala ubuchitha imali elinganiselwa ku R1,1 million njalo ngenyanga ukuqasha lezi zingqalasizinda nobekugcina sekuyimali engu-R14,184 million ngonyaka nokuyimali enkulu kakhulu leyo.
“Manje sesiyazi ukuthi angeke size sisaqasha ezinye izinkampani ukuba zisenzele umsebenzi ngenxa yokuthi asinayo eyethu ingqalasizinda.”
Le ngqalasizinda ibize umasipala imali elinganiselwa ku-R 33,764 million kanti akusiyona kuphela njengoba imeya iveze ukuthi kukhona enye futhi ngaphezu kwalena ethulwe ngokusemthethweni.